Why JFE MERANTI?
JMM မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အလုပ်အတွေ့အကြုံအကြောင်းကို နားထောင်ပါ
ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ကြားတွင် ရှိသော ဆက်ဆံရေးကို အထူးပင်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတွင်ရှိသော ကွဲပြားခြားနားသည် အလုပ်ခွင်ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ်များသည် ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အားသစ်တိုးစေပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစေပါသည်။ JFE MERANTI အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခွင့်ရခြင်းဟာလည်း ကျွန်တော့်တွင်ရှိသော ယခင် သြစတေးလျနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံများတွင် structural & construction designing of residential & commercial buildings အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်က ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံများကို အသုံးချခွင့်လည်းရပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရှေ့ဆက်ဖွံ့ဖြိုးမှု့နှင့်အတူ နောင်လာမည့် စိတ်ခေါ်မှု့များအတွက် ကျွန်တော်သည် ကုမ္ပဏီ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်ရခြင်းကို ဝမ်းသာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက် ကျွန်မဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ စတီးလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်စာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဆက်လက်ပြီး လေ့လာခွင့်ကို JFE MERANTI မှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိပါတယ်။ JFE MERANTI က ကျွန်မရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အရည်အသွေး တစ်ခုတည်းကို တိုးတက်လာစေတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေနဲ့ စဉ်းစားတွေခေါ်ပုံတွေကိုပါ တိုးတက်လာစေပါတယ်။
တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိခြင်းနှင့် မတူကွဲပြားမှု့ကို အားပေးခြင်း
JMM တွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသက်အရွယ်၊ ကျားမ၊ နိုင်ငံသား ခွဲခြားမှု့မရှိပဲ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေပြီး၊ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှု့များကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်။
JMM တွင် ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းစံနှုန်းများဖြင့် လေ့လာခွင့်ရရှိအောင် ပေးထားပါသည်။
ဝန်ထမ်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများတိုးတက်မှုအလားအလာကောင်းများသည် JMM ၏အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက် ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းသစ်များရဲ့ တိုးတက်မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိမန်နေဂျာများအနေဖြင့် အသိပညာဝေမျှပေးခြင်း နဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
Open Positions at JFE MERANTI
Are you interested in joining JMM, but don’t see an open position meeting your skillset?
Please go ahead and send us your CV as we’re continually looking for great talent.
Career | JFE Meranti Myanmar
JFE MERANTI® isaregistered trademark of JFE MERANTI Myanmar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
We are working hard to build our world-class quality products and will be launching them soon.
General JFE MERANTI® Updates
Products Info, Tips and Guides
You are visiting JFE MERANTI as Rollforming Business Material Distributor Architect Engineer Project Manager Public Sector Homeowner Press & Media Job-Seekers Others
Request to access Technical Library
POSITION SELECT YOUR POSITION LEVEL Project-Owners Project-Managers Specifiers-Architects Specifiers-Structural Engineers Contractors Roll Formers Developers and Contractors with Roll forming Machines Export Distributors Government Bodies Share Holders Media Job Seekers
If you already have login credential, You can login here.
Login to access Technical Library
If you don’t have login credential, You can request for access by signing up
Go back to login, You can login here.